Xildhibaanada Burkina Faso oo dhimaya mushahaarkooda - BBC News Somali
Xildhibaanada Burkina Faso oo dhimaya mushahaarkooda
Guud ahaan marka la isu geegeeyo mushahaarka dalka waxa uu ku dhowyahay boqol iyo konton oo doolar bishiiba.
Sida laga soo xigtay mid ka mid ah xildhibaanada ka tirsan gollaha qaran ee ku meel gaarka mushahaarka ay qaataan ayaa waxa uu isugu jiraa mushaar guud, lacaga gunno ah oo ay qaataan marka ay kulmaan ama ay ka qeyb qaataan fadhiyadda barlamaanka, gunno ay ku qaataan shaqooyinka ay ka qabtaan xafiisyadooda, guuno dhinaca caafimaadka iyo gunooyin dhinaca shidaalka ah.
Balse sida uu qabo Herve Kim oo ah agaasimaha dhaqdhaqaaqa Bilai Citoyen- oo ah dhaqaqaaq siyaasadeed ma ah in xildhibaanada la siiyo gunooyinka kal fadhiyadda ay ku qaataan. Waxa uu walaac ka muujiyey farqiqa weyn ee u dhaxeeya mushahaarka ay qaataan xildhibaanada iyo kan ay qaataan shaqaalaha caadiga ah.
Waxa uu aaminsanyahay 720 ama 900 oo doolar ay ku filnaanan lahayd xildhibaanada.
Tan iyo bishii Octobar ee sanadkii tagay, markii madaxweynihii hore Blaise Compaore xilka laga tuuray, waxa gollaha barlamaanka badalay golle qaran oo ku meel gaar ah oo ka kooban 90 xubnood.
Mid ka mid ah xildhibaanada aya waxa uu sheegay in uu door bidayo mushahaarka yar sababtoo ah waxa uu yiri waxay arrintaasi horumarinaysaa dowlad wanaaga iyo waxay sidoo kale dib u soo celinaysaa kalsoonada lagu qabo demoqaraadiyada.
Markii ay arrintan soo shaac baxday, shacabka ayaa caro ka muujiyey waxayna caradooda ku soo bandhigeen baraha ay bulshadu ku wada xiriirto iyagoo talabaadasi ku tilmaamay mid xaq daro ah kuna baaqay in la soo afjaro ku tagri falida awooda.